Podcast 11x03: Hodinihinay ny fampisehoana ny iPhone 11 sy ny zavatra hafa rehetra | Vaovao IPhone
Podcast 11 × 03: Mandinika ny fampisehoana ny iPhone 11 sy ny zavatra hafa rehetra izahay
louis padilla | | About us, Podcast
Ora vitsy monja taorian'ny nampahafantaran'i Apple anay ny iPhone 11 vaovao, Apple Watch Series 5, iPad 2019 ary nanome anay ny vidiny sy ny daty namoahana ny Apple Arcade sy Apple TV +, dia nohadihadianay daholo ny zavatra natolotra. Raha tsy afaka nahita ny Keynote an'i Apple ianao dia ity misy famintinana amin'ny antsipiriany momba izay azonay jerena sy renesina, ary raha efa hitanao io dia fotoana tokony handevonana ny zavatra hita rehetra sy hamakafaka ireo fanatsarana natolotr'i Apple.
Fiovana ampy ve ny famadihana iPhone amin'ity taona ity? Ho eo amin'ny laharana voalohany amin'ny finday avo lenta indray ve ny fakantsary? Ho vitan'i Apple ve ny manafoana ny fironana ratsy eo amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ireto maodely vaovao aseho ireto? Ireo fanontaniana rehetra ireo sy ny maro hafa dia resahina ao amin'ny podcast mivantana. Halahelo azy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 11 × 03: Mandinika ny fampisehoana ny iPhone 11 sy ny zavatra hafa rehetra izahay
Ny hevitro dia ny tsy nandavàn'izy ireo fanavaozana ny iPhone 11 Pro vaovao amin'ny ambaratonga izay tena sarotra ny mifanandrify amin'ny fanamarihana manerantany, araka ny filazan'ny mpanentana. Heveriko ihany koa fa io no ho telefaona tsara indrindra amin'ity taona ity. Tiako kokoa ny endrika farany fa tsy ny fandikan-teny, na dia tena misy fotony aza izany, satria ny tsiro amin'ny loko. Ny processeur toa an'i Apple efa nahazatra antsika, ny tsara indrindra tsy misy fisalasalana.
Tsy haiko ny momba anao, fa azoko tsara ny sary ary rehefa miresaka momba ny sary aho dia fantatro izay lazaiko.
Ny fakantsary an'ny iPhone tato anatin'ny taona vitsivitsy, tsy nandroso toy ny fifaninanana ary tsy milaza izany aho. Nandeha tamin'ny 7 Plus ka hatrany amin'ny Xs Max aho ary ny kalitao izay atolotry ny terminal roa ahy ao amin'ny fizarana sary, ho ahy, dia mitovy ihany. Ary tsy izaho irery no milaza an'io.
Mety mahatsikaritra zavatra tsy hitan'ny olona maro aho fa manan-danja amiko amin'ny sary.
Inona no ataoko miasa amin'ny podcast teknolojia? Mazava ho azy fa tsy ho any an-dakozia aho satria tsy mahay mahandro, fa vetivety dia haiko ny momba ny teknolojia. Tsy 20 taona katroka aho.
Apple Watch Studio dia manolotra famaranana vita sy tarika mihoatra ny 1.000 hisafidianana
Apple dia namoaka ny horonantsary fampidirana ny iPhone 11 Pro vaovao